Fairy Tale Land of Vietnam, Bana Hills | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on November 16, 2016 November 16, 2016 by Nu Myat
🏰 ရဲတိုက်ကြီးတွေကြား ပုံပြင်ထဲက မင်းသားမင်းသမီးစုံတွဲအလား ထင်မှတ်မှားရမယ့် နေရာလေး 💕
💕၀ါကျွတ်ပြီဆိုတော့ Prewedding ရိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဟန်းနီးမွန်းထွက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကို Romantic ဆန် တာနော်
💕ဥရောပထိ ဝေးဝေးလံလံသွားစရာမလို အနီးအနားမှာတင် ဥရောပ အငွေ့အသက် တကယ်ခံစားရမှာ
💕Vietnam နိုင်ငံ တောင်ပေါ်မြို့လေး ဒါနန်းရဲ့ Ba Na တောင်ပေါ် ဆောက်ထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ပြင်သစ်မြို့လေးပါ
အသေးစိတ်ကို ပုံလေးတွေနဲ့လည်း တစ်ပုံချင်းစီ ပုံဖော်ပေးထားပါတယ်။
✈ ဒါနန်းကို ဘယ်လိုသွားမလဲ ✈
ဒါနန်းကို ရန်ကုန်ကနေ တိုက်ရိုက် Flight မရှိပါဘူး။ ဒါနန်းက Vietnam နိုင်ငံရဲ့ အလယ်မှာ ရှိနေတာဆိုတော့ မြောက်ဘက် ဟနွိုင်းကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် တောင်ဘက် ဟိုချီမင်းကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် Domestic Flight တစ်ခါ ပြန်စီးမှ ရမှာပါ။
ဒါမှမဟုတ် ဘန်ကောက်ကနေ သွားလည်းရပါတယ်။ အခုဆို Bangkok Airways က Bangkok to Danang Flight တွေ တစ်ပတ် ၅ရက်ပြေးဆွဲနေပြီဆိုတော့ သွားလို့ တော်တော် အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ နုမြတ်တို့တုန်းက ရန်ကုန်ကနေ ဘန်ကောက်ကို အရင်သွား၊ ဘန်ကောက်မှာ Shopping ထွက်၊ တစ်ညအိပ်ပြီးမှ ဒါနန်းကို ဆက်သွားတာပါ။
ဘန်ကောက်မှာ တစ်ည မအိပ်ပဲ ဒါနန်းကို တန်းသွားမယ်ဆိုရင် Ygnကနေ Bkk ကို မနက် ၆နာရီ Flight နဲ့ သွားလို့ရပါတယ်။ Transit Time ၃နာ၇ီ အတွင်း ဘန်ကောက် သုဝဏဘူမိလေဆိပ်ကြီးမှာ Shopping ထွက်ချင်ထွက် ဒါမှမဟုတ် Bangkok Airways Lounge မှာ အေးအေးဆေးဆေး နှပ်နေလို့ရတယ်။ အဲ့ Lounge က Bangkok Airways ရဲ့ Transit ခရီးသည်တိုင်း လာအနားယူလို့ရတော့ တော်တော့်ကို အဆင်ပြေတယ်။ Wifi လေး သုံးရင်း High Tea Buffet ကျွေးတဲ့ မုန့်လေးတွေစား၊ အအေးတွေ ကော်ဖိတွေ သောက်နဲ့ ပျော်စရာပါ။ အဲ့က ကောက်ညှင်းထုပ်ဆို စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ အရသာရှိလို့ ဧည့်သည်တွေဆို ကြိုက်မှကြိုက် … ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေလည်း ငန်ကျိကျိနဲ့ စားလို့ကောင်းတယ်… တကယ်! Business Class တွေ အတွက်ဆို ပိုလို့တောင် အစားအသောက်စုံသေး။ Menu ကြည့်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တာမှာစား။ ချက်ချင်း ချက်ကျွေးတာ။ အားလုံး Free နော်
ဘန်ကောက်ကနေ ဒါနန်းကို ၁နာရီခွဲလောက်ပဲ လေယာဉ်စီးလိုက်ရင် ရောက်ပြီ။
ဒါနန်းမြို့ကနေ Bana Hill ကိုတော့ ကားနဲ့ဆို ၄၅မိနစ်လောက် မောင်းရပါတယ် ။
တောင်ခြေကနေ တောင်ပေါ်ကို Cable Car စီးပြီး သွားရပါတယ်။ Cable Car ဆိုတာ ကြိုးဆွဲ ကောင်းကင်ရထားလုံးလေးတွေပါ။ ရေတံခွန်ကြီးတွေ တောတောင်တွေ အပေါ်ကနေ Cable Car နဲ့ တရွေ့ရွေ့သွားရတဲ့ Feel က တအားမိုက်ပါတယ်။ တောင်ဆင်းလမ်းက ရှုခင်းတွေဆို ပိုလို့တောင် လှပါသေးတယ်။ နုမြတ်တို့ သွားတဲ့ အချိန်က မိုးမကုန်သေးတော့ မြူတွေ ဆိုင်းနေတာ။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ မြူတွေကြား စိမ်းစိုနေတဲ့ ရှုခင်း တခါတခါ ပေါ်လာတာ ပျော်စရာကောင်းသလို ရင်တဖိုဖိုလည်း ဖြစ်ရတယ်။ Bana Hill အပေါ်မှာ cable car ၃ခုတောင်ရှိပြီး၊ အဲ့ထဲက နောက်ဆုံးဖွင့်လိုက်တဲ့တစ်ခုက ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး Single Rope Cable car System ဖြစ်ပါသတဲ့။ နောက်ပြီး တောင်အောက်ခြေကနေ မီတာ ၁၃၆၈ အမြင့်ထိတက်နိုင်လို့ အမြင့်ဆုံး တက်နိုင်တဲ့ Cable Car လည်း ဖြစ်ပါသတဲ့လေ…
💐#LE_JARDIN_DAMOUR ပန်းဥယျာဉ်ကြီး 💐
တောင်ပေါ်မှာက တောင်ထိပ်တစ်ခုစီအပေါ်မှာ Theme တစ်ခုဆီ လုပ်ထားတာဆိုတော့ အရင်ဆုံး ပြင်သစ်ပန်းဥယျာဉ်ခြံကြီးထဲ အရင်သွားပါတယ်။ အဲ့ကိုသွားဖို့ Fanicular လို့ခေါ်တဲ့ တောင်တက်ရထားလေး စီးရပြန်ပါတယ်။ ရထားလေးကလည်း ရှေ့ပွင့်နောက်ပွင့်ဆိုတော့ စီးရတာပျော်စ၇ာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရှေ့ဆုံး or နောက်ဆုံးမှာ နေရာယူပါ။ ရှူခင်းတွေခံစားရင်း တရွေ့ရွေ့တက်ရတာ ပိုပျော်ဖို့ကောင်းလို့ပါ။
ဥယျာဉ်ကြီးထဲ ပန်းခင်းတွေထက် ပိုလှနေတာကတော့ ရုပ်တုကြီးတွေပါ။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ စကျင်ကျောက် နတ်မိမယ်ရုပ်ကြီးတွေ၊ ဧရာမ လိပ်ပြာရုပ်ကြီးတွေ၊ ဧရာမစစ်တုရင်ရုပ်ကြီးတွေ၊ စီတန်းထားတဲ့ တိုင်ဖြူဖြူလေးတွေကြား ရှေးဟောင်း ဘုရင့်ပန်းခြံထဲ ရောက်သွားသလိုလို….
ပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ Love garden, heaven garden, legend garden, secret garden ဆိုပြီး နာမည်အမျိုးမျိုး Theme အမျိုးမျိုးနဲ့ ပန်းခြံ ၉ခုထပ်ခွဲထားပါသေးတယ်တဲ့
🏰#French_Village (ပြင်သစ်ရွာလေး) 🏰
ပန်းခြံကနေ တောင်ဆင်းရထားနဲ့ ပြန်ဆင်းပြီး နောက်တစ်တောင်ကို Cable car နောက်တစ်ခု နဲ့ တက်ရပြန်ပါတယ်။ Station ကနေ ထွက်ထွက်ချင်း မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းက မှင်သက်စရာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Vietnam ရောက်နေတယ် ဆိုတာကိုတောင် မေ့သွားပါတယ်။ ကျောက်ခင်းထားတဲ့ ရင်ပြင်အလယ်က ရေပန်းလှလှလေးကို ဥရောပ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေ ၀န်းရံထားတာ လှမှလှ။ လမ်းလေးတွေကလည်း ကျောက်ခင်းလမ်းလေးတွေ။ အနောက်တိုင်း စိတ်ကူးယဉ် ပုံပြင်တွေထဲက ရှေးဟောင်းမြို့လေး ရောက်သွားသလိုလို… တကယ်ကို ဥရောပ အငွေ့အသက်ခံစားရပါတယ်။
အဆောက်အအုံတွေ ရုပ်တုတွေ လမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုတ်တွေက အစ အသေးစိတ် လုပ်ထားတာ။ လမ်းတွေမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Music တွေကအစ ငြိမ့်ငြိမ့်ငြောင်းငြောင်းလေး။
🎠 #Fantasy_Park ကစားကွင်း 🎡
French Village လေးထဲမှာ ဓာတ်ပုံတွေလှည့်ပတ်ရိုက်ပြီး၊ နေ့လည်စာလည်းအဲ့က Vietnam ဆိုင်လေးမှာ စားပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ Fantasy park လို့ခေါ်တဲ့ Indoor ကစားကွင်းထဲ ၀င်လေ့လာခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ထဲမှာကလည်း ကစားနည်းတွေ ၉၀ကျော်တောင်ရှိတာ။ journey to the center of the Earth စာအုပ်ကို အခြေခံပြီး ဆောက်ထားတာမို့လို့ Theme Park ထဲ ၀င်လိုက်တာနဲ့ မြေအောက်ရောက်သွားသလိုလို။ အဲ့မှာ ဒိုင်နိုဆော ပန်းခြံတွေ၊ Fairy land တွေလည်း ရှိသေးသတဲ့၊ အချိန်မရှိလို့ ဘာမှ မကစားလိုက်ရဘူး 😥
အဲ့ fantasy park ထဲမှာ ဖယောင်းပြတိုက်ကြီးလည်းရှိတယ်။ တကယ့် ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီတွေရဲ့ ဖယောင်းရုပ်တုတွေနဲ့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်လို ပျော်ပျော်ပါးပါး တွဲရိုက်လို့ရတယ်။ အိုက်တင်ပေးတတ်ရင် ပေးတတ်သလို ပုံတွေက ပျော်စရာကောင်းနေမှာနော်
ဒါကတော့ bana Hill ရောက်သူတိုင်း စီးကြတဲ့ တစ်ယောက်စီး Roller Coaster ပါ။ လျပတဲ့ ရှုခင်းနောက်ခံနဲ့ အရှိန်ခပ်ပြင်းပြင်းစီးရတာဆိုတော့ စီးဖူးတဲ့သူတိုင်း အရမ်းပျော်ကြတယ်။ မိုးရွာနေလို့ အဲ့ဒါလည်း မစီးရဘူး။ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး 😥
ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုနေထိုင်တဲ့ ဒါနန်းမြို့လေးရဲ့ ဘာနာတောင်ထိပ်မှာ ဘုရားကျောင်းတွေလည်း အများကြီး ရှိလို့ သွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ပါသေးတယ်။
💸 ဘယ်လောက်ကျသလဲ 💸
Bana Hill မှာ ၀င်ကြေးက Vietnam ပိုက်ဆံ ၆သိန်း (ကျပ် ၃သောင်းခွဲလောက်) ပေး၇ပါတယ်။ Ticket ၀င်ကြေးထဲမှာ အားလုံး အပြီးအစီးပါပါတယ်။ ဘာမှ ထပ်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး ။ ကစားကွင်းထဲ ကြိုက်သလောက်ကစားနိုင်ပါတယ်။
Bana Hill ပေါ်မှာက လည်စရာတွေများလို့ တစ်နေကုန် အချိန်ပေးမှ အကုန်နှံ့မှာပါ။ ညအိပ်နိုင်ရင်ပိုလို့တောင် ကောင်းပါတယ်။ Newly married Honeymoon couple တွေ ပြင်သစ်ရွာလေးထဲက Bana Hill Resort မှာ တစ်ညလောက်အိပ်၊ Romantic ဖြစ်လှတဲ့ Garden ကြီးထဲမှာ Wine လေးသောက်၊ ချစ်စကားလေးတွေဆိုနဲ့ အရမ်း ကို Romantic ဖြစ်မှာပါ။ Pre wedding photo ရိုက်သူတွေအတွက် Charges ထပ်မကောက်လို့ ကြိုက်တဲ့နေရာ ကြိုက်သလောက်ရိုက်နဲ့ ပျော်စရာပါ…
ပိုက်ဆံအကုန်အကျမများဘဲ ရက်အကြာကြီးပေးစရာမလိုဘဲ ဥရောပအငွေ့အသက်ကို ရနိုင်တဲ့ တအား Romantic ဖြစ်တဲ့ နေရာလေးမို့လို့ share ပေးလိုက်တာပါ။ တကယ်လှမလှ၊ ပျော်စရာ ကောင်းမကောင်းကို အောက်ကပုံလေးတွေမှာသာ ကြည့်ကြည့်ကြပါတော့
🌏ကိုယ့်ဟာကိုယ်သွားလည်မယ့်သူတွေ အတွက် ခရီးစဉ် အကြမ်းဖျဉ်းလေးပါ 🌏
Day 1- ရန်ကုန်-ဘန်ကောက်-ဒါနန်း (Bangkok airways)
ဒါနန်းကို နေ့လည် ၁၂လောက်ရောက်။ ဟွေးမြို့ကို တန်းသွား။ ၂နာရီလောက် ကားမောင်းရ။ ဟွေးမှာ နန်းတော်ထဲလေ့လာ။ ဘုရားသွား။ ညဘက်မြစ်ထဲ လှေစီး။ ဟွေးမှာ ညအိပ်
Hue မြို့ကနေ Danang ပြန်။ Bana Hill တန်းသွား။ ကားနဲ့ ၃နာရီလောက် ကြာမယ်။ Bana Hill တောင်ပေါ်တစ်နေကုန်နေ။ တောင်ပေါ်က Resort မှာ ညအိပ်။ (အဲ့မှာ ညမအိပ်ရင် ၁ရက်လျှော့လို့ရတယ်။ )
တောင်ပေါ်က ပြန်ဆင်း။ Danang မြို့ထဲက စကျင်ကျောက်တောင်ပေါ်တက်။ စကျင်ရုပ်ထုတဲ့နေရာ သွားလေ့လာ။ Hoi An မြို့ကူး။ အဲ့က old Town မှာ ညဈေးလျှောက်။ Hoi An or Da Nang မှာ ညအိပ်
danang – bangkok – yangon ပြန် (with Bangkok Airways)
အားလုံးလှပပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့ရက်များစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော် 😘 😘
This entry was posted in Asia, Travel, Uncategorized, Vietnam and tagged Asia, Bana Hills, Bangkok Airways, Cable Car, Danang, Experience, French Village, Travel, Vietnam. Bookmark the permalink.
← 9/11 Memorial in New York, USA
Pyramids of Giza, Egypt ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအံ့ဖွယ်တစ်ပါး အီဂျစ်ဂီဇာပိရမစ်ကြီးများ →